SSL Security for Websites SSL ရဲ့ အရှည်ကတော့ Secure Socket Layerဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းထားပေးတဲ့ စံစနစ် ဖြစ်ပီးတော့ Server နဲ့...
Hosting type တွေကို မပြောခင် ပထမ ကျွန်တော် Hosting ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ Hosting ဆိုတာက website တွေကို store...
React ဟာ ယနေ့အချိန်မှာ အရမ်းဟော့နေတဲ့ Front-end နည်းပညာတစ်ခုပါ။ တစ်ကယ်တော့ Frontend နည်းပညာ အနေနဲ့တင် မကပါဘူး၊ Hybrid Mobile App နည်းပညာ အနေနဲ့ရော၊...
E-commerce Website (for every business )လို့ပြောလိုက်လျှင် Online မှ တစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချထားပြီး Website ထဲသို့ဝင်ရောက်ကာ စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ မြင်ယောင်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။...
Information website for your business or company Websiteဆိုတာကတော့ အင်တာနက်ပေါ်က ဆိုင်ခွဲ ရုံးခွဲတစ်ခုလိုပါပဲ Websiteကနေ ဘာတွေပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ ကိုယ့်Customerတွေကို ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့...
Great Domain Name choosing for your business , company or services မိတ်ဆွေ၏ ဒိုမိန်းအမည်က မိတ်ဆွေ၏လုပ်ငန်းနဲ့ထပ်တူညီတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကမှတ်ပုံတင်တစ်ခုပါ။ အင်တာနက်လိပ်စာဖြစ်တဲ့...
WordPress site အတွက် သင်က အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် LMS Plugin ကို ရှာဖွေနေပြီလား? Learning Management System (LMS) Plugins ကို သုံးခြင်းဖြင့်...
# Web Design & development Services Websiteဘာကြောင့်ပြုလုပ်သင့်လဲ မပြောခင် ကျွန်တော်တို့ Myanmar Web Store၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ…… ✅ကျွန်တော်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်က...
Vowifi (သို့) Wifiကိုအသုံးပြု၍ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း Voice Over Wifi ( VoWifi ) သည် ဝိုင်ဖိုင်Networkမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများမှ VOwifi ရရှိသောSmartPhoneများကို အသုံးပြုပြီး...
၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကြည့်နေစဉ်“ Add to Home Screen” အလံကို မိတ်ဆွေတို့မြင်ဖူးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Progressive Web App ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ မမြင်ဖူးရင်တော့ https://www.pinterest.com လို...
January 15, 2020	29 Comments
November 6, 2019	3 Comments
Do you know about Facebook?" >
September 27, 2018	1 Comments
Sang Stagnitto says:
certainly be one of the very best in its field. Very good blog!...
Laurena Urbancic says:
It’s actuallyanice and helpful piece of information. I’m happy that you shared this helpful information with...
Annett Hofman says:
You made some first rate points there. I looked on the web for the difficulty and found most individuals will ...
Awsome site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also...